Ichina lekhethini lezinyosi elisha elimelana nelanga nelimelana nokushisa Ukwakha kanye nefektri | Isifunda
Ikhethini lezinyosi elisha elilwa nelanga futhi elingamelana nokushisa
Ikhethini lezinyosi, elaziwa nangokuthi ikhethini lomzimba, lalikhuthazwa yindlu yezinyosi, eyadunyiswa ngabadwebi bezakhiwo ngokuthi "yisakhiwo esihle kunazo zonke emhlabeni". Kungenxa yokuthi idizayini yezinyosi engenalutho, ukuze umoya uhlale "emgodini ophakeme", uvimbe ukuhlangana okuphezulu nomoya okuphansi okubangelwe ukuqaphela ukushisa kokushisa, kungaqinisekisa ukuthi umehluko wezinga lokushisa ngaphakathi nangaphandle ofinyelela ku-8 degrees I-C-10 degrees C, ngenkathi ivimba ngempumelelo indlela yokudlulisa umsindo, ngaleyo ndlela idlala indima enhle kakhulu ekuhlukaniseni umsindo, futhi yakhe indawo enokuthula nenethezekile.
Indwangu ephothiwe ikhethini lezinyosi, khetha indwangu ye-polyester eyinhlanganisela yesikhumba se-aluminium, hhayi ukusonteka ngemuva kwelanga lesikhathi eside. Isinamathelisi se-pur esisebenzayo esincibilikayo esishisayo sikhethelwe ukubopha, ebinamandla amakhulu okuxhuma, ukumelana okuphezulu nokushisa okuphansi, ukushisa nokubamba okubandayo, ukumelana nomhwamuko wamanzi, kanye nokuzivumelanisa kangcono nemvelo ebukhali yokushisa okuphezulu nemisebe ephezulu yokukhanya phezulu yendlu yokukhanya kwelanga.
Sithuthukise inqubo yokukhiqiza yendabuko yamakhethini oju lwezinyosi, sisebenzisa indwangu ye-shuttle esikhundleni sendwangu engalukwanga njengendwangu yamakhethini oju lwezinyosi, kanye ne-pur wet esebenzayo esetshenziswayo encibilikisa ingcina esikhundleni se-polyester ejwayelekile noma i-polyamide hot melt adhesive. Lolu wuhlobo olusha lwendwangu yokuvala izindwangu yekhekhe lezinyosi, enezinzuzo zempilo ende yokusebenza, ukumelana nokugqoka, nokumelana nodaka kwendwangu yokuhamba. Ngasikhathi sinye, ibuye ibe nokuthuthuka okukhulu kokuthungwa nokuthungwa.
Ukusetshenziswa kwe-New Spindle Fabric Honeycomb Curtain
Ikhethini lezinyosi lezulu eliphakeme kakhulu Isibani esibhakabhakeni, iwindi elinophahla oluthambekele, zonke izinhlobo zophahla lwelanga, zonke izinhlobo zobunjwa, ngisho nophahla lwe-arc, zingaxazulula kahle inkinga yokufiphaza isibhakabhaka ngekhethini elisha lezinyosi zezinyosi.
Sikhiqiza indwangu eyelukiweyo yendwangu yekhethini lendwangu, kunezincazelo ezintathu ezingama-20mm / 25mm / 38mm, imininingwane yokupakisha yamamitha amathathu ububanzi, amamitha angamashumi amabili ubude. Endabeni yevolumu yoku-oda ukufinyelela ubuningi ngokwezifiso, ububanzi obuphakathi kwamamitha ama-2-3, bungeziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zamakhasimende, umbala nawo ungenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Langaphambilini Ikhethini lezinyosi elisha elingenamanzi
Olandelayo: Ikhethini lezinyosi lezintambo elenziwe ngezifiso elenziwa ngezifiso
Ikhadi Lezikhombisi Lomswakamo Lamachashaza Ayisithupha, Ikhadi Lokukhomba Umswakama, Ikhadi lamahhala leCobalt, ICobalt Mahhala, Ikhadi Lesikhombi Somswakama Mahhala, Ukuhlola Umswakama Card,